सि.वि गहतराजको राजनीतिक भावना बुझिदेउ न कसैले ? – Ratopati News
Ratopati News१२ माघ २०७८, बुधबार २१:३९
आजभोली म अरु भन्दा पनि अबको इसाई समुदाय कतातिर जान्छ होला भनेर सोचेर बस्छु । सुरुको नेपाली इसाई इतिहास पल्टाउँदा र ती एतिहासिक पात्रहरुले परमेश्वरको निम्ति गरेको महान निश्वार्थ सेवालाई पढ्दा प्राय सबैको आँखाबाट साहसिक आँसु बग्छन् । यो वर्तमान युगको इसाई पुस्ताले गरेको कार्यशैली देख्दा कहिले मनमा हाँसो उठ्छ कहिले मनमा निराशा पैदा हुन्छ ।
अरु भित्रि पीर व्यथा त कति छन् कति, ती आउने दिनहरुमा प्रसङ्गबश लेखौँला, पढौँला । नेपाली इसाईत्व बुज्दै जाउँला । अहिले हालसालै चर्चामा आएको विषय नेपाल राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघका अध्यक्ष सि.वि गहतराजले पार्टी दर्ता गरेर आफ्नो जीवनलाई राजनीतिमा खर्च गर्दैछन् भन्ने हल्ला छ । यहि विषयलाई उठान गर्दा राम्रै होला ।
म इसाईहरुले राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको व्यक्ति होइन् । स्वच्छ र सफा राजनीति गरेर इसाईहरु देशको नेतृत्वदायी स्थानमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । उच्चस्तरीय राजनीतिक दलहरुको खिचातानी, माओबादीको दुःखान्तमय फुट, कम्यूनिष्टहरुको नमिल्दो निति तथा कार्यक्रमले नेपाली जनाको राजनीतिक तृष्णा मर्दै गएको छ । तर पनि भरत गिरी, वि.पि खनाल, जयवन्त विक्रम शाह लगायतका अन्य व्यक्तिहरुले राजनीतिबाट देशलाई निकास दिने सपना देख्नु धेरै ठूलो कुरा हो । यस्तो महान विचारको कदर हामीले गर्नैपर्छ ।
ख्रीष्टियन महासंघका अध्यक्ष सि.वि गहतराजलाई धेरै पास्टर ज्यूहरुले पहिलेदेखि नै यसले राजनीति गर्दैछ भनेर शंकामय भाषा उद्घोष गर्दै हुनुहुन्थ्यो । नेपाल राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघको विधिविधानले इसाई समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको भाषा बोलेपनि सि.वि गहतराजको कार्यशैलीले राजनीति गर्दैछ भनेर शंकामय भाषा जसले पनि सजिलै बुझ्न् र बोल्न सक्थ्यो । राजनीतिमा सफल हुन सक्ने व्यक्तिको रुपमा म पनि सि.वि गहतराजलाई बुझ्थे र बुझ्छु पनि । तर अहिले उहाँले पार्टी दर्ता गरेर राजनीतिको माध्यमबाट देशको सेवा गर्छु भनेर हिड्दै गर्दा जनताले सि.वि गहतराजको विश्वास कतिसम्म गर्छ र उनले जनताको विश्वास कतिसम्म जित्न सक्छन् भन्ने कुरा ठूलो हो ।
अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिको खेल मैदानमा कुनै पनि नेता पूर्णरुपले सफल भएको म देख्दिन । भर्खर नयाँ दर्ता भएका पार्टीहरुलाई त झन जनताले पत्ताउनै छोड्यो । एकतामा आउन नचाहानेलाई त झन जनताले राम्रो मान्छे जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसकारण सि.वि गहतराजको राजनीति पनि चाँडै नै सफल हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई संका नै लाग्छ । किनकि राजनीतिप्रति जनताको धेरै बितृष्णा छ । हुन त सि.वि गहतराजको आफ्नो आन्तरिक विचार मेरो भन्दा धेरै फराकिलो हुन सक्छ ।
अब कुरा रह्यो इसाई धर्ममा आस्थावान व्यक्तिहरुले नेतृत्व गरेका पार्टीहरु जनजागरण पार्टी नेपाल, आमूल परिवर्तन मसिह पार्टी र राष्ट्रिय मुक्ती आन्दोलन पार्टी किन एकतामा छैनन् ? उनीहरुको पार्टी भित्रको पदयी गञ्जागोल शैलीकै कारण अहिलेसम्म नमिलेको प्रष्ट देखिन्छ । भरत गिरी र वि.पि खनाल मिलेर जाने भनी माओबादी केन्द्र र ऐमालेको सिको गर्दै दुईवटा अध्यक्ष भएको हामीले देखेकै त हो । यसको मतलब झुक्न र कम्जोर हुन दुबैले नचाहेको होइन र ? अहिले सि.वि गहतराज राजनीति पार्टी दर्ता गर्छु भन्दै हिड्दैछन् उनलाई पनि अध्यक्ष पद नै चाहिएको छ भनेर बुझ्न कहाँ गाह्रो छर ? मानौ : भरत गिरीले एकता गर्न मानेन रे । लोकमणी ढकालले पार्टी स्थापना गर्दा जनजागरण पार्टीको संस्थापक महासचिव सि.वि गहतराज थिए भने अब गहतराजले जनजागरण पार्टीमै रहेर राजनीति गर्दा पनि राम्रो हुन्थ्यो ? सफलता चाहने र राजनीतिप्रति तिब्र तृष्णा भएको व्यक्तिले धैर्य गर्नु राम्रै त होला नी ? पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्षमाथि उठ्न् सक्ने व्यक्तिलाई जनताले राम्रो मान्छन् र राम्रो पनि हुन्छ । मेरो विचारमा सि.वि गहतराजले पनि तातै खाउँ जल्दै मरिजाउँ जस्तो नगर्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई । जनजागरण पार्टीका अध्यक्ष वि.पि खनालले पनि सि.वि गहतराजको राजनीतिक चाहनाको भावलाई राम्रोसँग बुझन आवश्यक छ ।
सि.वि गहतराको राजनीतिक भावनालाई दर्ता भएर आफ्नो एउटा अस्तित्व निमार्ण गरेका आमुल परिवर्तन र जनजागरण लगायतका पार्टीहरुले चाँडै बुझ्दा राम्रो होला । यदि सि.वि गहतराजको नेतृत्वमा फेरी अर्को पार्टी दर्ता भयो भने नेपाली इसाई समुदायले तपाईँहरु कसैलाई पनि समर्थन गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पदको लोभमा मोहित हुनेहरुलाई पनि के नेता बनाउनु भन्ने झोक पक्कै चल्न सक्छ । यदि सिद्धान्तको कारण मिलेको होइन भने पनि मिलाउनु प-यो ।
अहिलेका दिनसम्म इसाई समुदायको चाहना भनेकै भरत गिरी, वि.पि खनाल, सि.वि गहतराज, जयबन्त विक्रम शाह लगायतका नेताहरुलाई साँसदमा पु-याउनुपर्छ भन्ने झिनो आशा बोकेका छन् । यदी तपाईहरु मिल्नुभएन र एउटाले अर्काको अस्तित्व स्वकार भएन भने तपाईँहरुको राजनीतिमा उतारचडाब आउँछ । इसाई समुदायले तपाईहरुलाई पत्ताउन छोड्छ । विचार र शिद्धान्त तपाईँहरुको नमिलेको पक्कै होइन पद नै नमिलेको प्रष्ट देखिन्छ । एकतामा आएर एउटै सिद्धान्त प्रतिपादन गरी एउटै संकल्प लिएर अगाडि बड्नुहोस् त तपाईहरुको पक्षमा ताली बुझ्न सुरु गर्छ । यति गर्नुभयो भने हाम्रो वि.पि खनाल पनि सांसद, भरत गिरी पनि साँसद र सि.वि. गतहतराज पनि साँसद आह ! क्या गजब देखिने हाम्रा मान्छेहरु साँसद हुँदा । हाम्रा मान्छेहरु त मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ । तर नमिलेर अमिल्दो पदीय राजनीति गर्ने हो भने त सि.वि गहतराजले पनि पार्टी दर्ता गरेर अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ । जुन पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व राम्रो छ त्यहि अगाडि बढ्छ यदि राम्रो भएन भने त त्यहि टिठलाग्दो पारामा फेसबुकमा लेख्ने बस्ने पार्टीको अध्यक्ष हुँ भनेर गुम्म पर्ने यतिकै दिन बित्छन् सक्छ हजुर ।
कोभिड-१९ ले निम्ताएको अनलाइन शिक्षाको रबैया
१७ आश्विन २०७७, शनिबार ०५:३०